KAOMININA BELOBAKA : Tafakatra 3 762 600 Ariary ny vola niditra tao anatin’ny roa herinandro
Roa herinandro monja no nandraisan’i Andriamampionona Ferlin antsoina hoe maitre Sanga ny fitantanana dia efa tafakatra 3 762 600 ariary sahady ny vola miditra ao amin’ny kaominina Belobaka ao. 11 février 2020
Mila efaina ara-dalàna ny volan’ny kaominina ahafahana manao fotodrafitrasa, hoy ny ben’ny tanàna vaovao. Ao anatin’ny fanatsarana ny fampidiram-bolan’ny kaominina ny ben’ny tanàna sy ny mpanolotsainy, satria teo aloha dia misy ny aferafera, ka mandoa kely any amin’ny tompon’andraikitra dia tsy aloa ny an’ny kaominina. Efa nantsoina ireo mpandraharaha hijerena ny vary mangatsiakan’ny kaominina, ary hojerena ny fomba ahazoana ireo hetra tokony haloa. Ankoatra izay dia hojerena manokana ny tamberim-bidy amin’ny vato, hoy izy ka mila manao « licence » avokoa ireo fiarabe mitatitra vato.
Ny kaominan’i Belobaka no mamatsy vato ny fanorenana rehetra ao Mahajanga, hoy izy. Manana fahefana feno ny polisy kaominaly ao amin’ny kaominina Belobaka mampiditra fourrière raha tsy manara-dalàna na fiaraben’iza na iza, hoy hatrany izy. Mila aloa ihany koa ny tamberim-bidy rehetra tokony haloa. Efa mampahafantatra sahady ireo mpitatitra fa hampiantsona izy ireo mikasika izay. Fomba fiasa vaovao koaany hoe isaky ny faran’ny volana dia anaovana tatitra ny vola miditra amin’ny kaominina mba hisian’ny mangarahara.